‘न्याय’का नाममा आइजीमाथि षडयन्त्र ! – मुलधार न्युज
Home > समाचार > ‘न्याय’का नाममा आइजीमाथि षडयन्त्र !
२ आश्विन २०७५, मंगलवार १३:२०
काठमाडाैं – बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तलाई न्याय दिलाउन विभिन्न क्षेत्रबाट सरकारलाई दबाब छ । राजनीतिक दल, मानव अधिकारकर्मी, महिला संघ एनजिओ/आईएनजिओ लगायत बिभिन्न समुह पन्तको न्यायका लागि आन्दोलनमा उत्रिएर बाबु यज्ञराज पन्त र आमा दुर्गादेवी पन्तको घाउमा मल्हम लगाउन प्रयासरत छन् ।
तर, आइजी खनालले अनुसन्धानका लागि डिआइजी बस्नेतको नेतृत्वमा सक्रिय टोली खटाएका छन् जसले घटनाको तथ्य सार्वजनिक गर्नेछ । उनले प्रहरी संगठनको गरिमा बढाउँदै दोषी भनिएकाहरूको निलम्बन पनि गरिसकेका छन् ।जनप्रहार साप्ताहिकबाट